Tolotra Rakuten, iPhone 6 Plus amin'ny € 200 latsaka | Avy amin'ny mac aho
Manidina iPhone 6 Plus
Applelised | | About us, Apple products
Iza no mbola tsy te-handray tambim-barotra fa tsaho fotsiny reko? Tsara vintana ianao androany ary anio ihany avy any Rakuten no ahazoantsika izany vaovao adala izany.
Rakuten sy lamba firakotra!
Anio dia omenay, hey! Toa ny tompon'ny Rakuten.com Manana telefaona (na vola) be dia be izy ireo ary satria mahatsapa malala-tanana izy ireo androany dia manome tolotra iray izay vitsy amintsika no afaka manohitra ary ny an'ny iPhone 6 Plus Space Grey fa…… 599 € !!! Tolotra tsy mampino izy io satria amin'ny tolotra hafa toa ny Andro tsy misy VAT dia 17,35% ihany no esorin'izy ireo raha ity tolotra ity (jereo ny angona) dia fihenam-bidy 25% amin'izay ananantsika.
Tadidio fa ny vidin'ity maodely ity ao amin'ny App Store dia amin'ny vidiny 799 € tany am-boalohany ary amin'ny magazay hafa toa Ny trano an-tariby dia hita amin'ny € 789 ary amin'ny MediaMarkt na Carrefour amin'ny € 769, izay mahatonga an'ity tolotra ity ho iray amin'ireo mahaliana indrindra eny an-tsena ankehitriny ary izay tsy ahafahan'ny mpifaninana mifanentana aminy. Lazao anao koa fa ho avy ny telefaona Tsy misy orinasa, izay manintona kokoa azy.
Ny sasany amin'ireo fiasa amin'ity maodely ity dia:
Ny tolotra dia tsy tsara ary ho an'ny vidin'ny a iPhone 5S Miaraka amin'ny teknolojia 2 taona lasa izay, afaka maka fitaovana maodely farany misy efijery mihoatra ny habeny isika. Ampahatsiahiviko anao indray fa ny tolotra dia anio ihany na haharitra mandra-pahatapitry ny tahiry an-tariby izay toa ampy ihany izao, ka raha mieritreritra ny hiova terminal ianao ary tsy te hiditra amin'ny faharetan'ny andevo ataon'ireo orinasa tsy mahomby. telefaona efa fantatrao izay tokony alehanao ary rehefa nilaza an'io ianao, dia misy teny mahafinaritra tonga ao an-tsainao ...RES INSENSATE!
SOURCE | Rakuten
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Manidina iPhone 6 Plus
Andreu dia hoy izy:
Marina ny anao. toa manaitra ny tolotra raha toa ka marina izany. Ilay mpivarotra geekland dia manolotra vokatra izay tsy ananany ary toa tsy hanana izany vidiny izany velively. Latsaka tao anaty fandrika ny zanako lahy ary nividy iray tamin'ireo finday tamin'io vidiny tsy nampoizina io. Tonga ny olana rehefa avy eo. Ny fandefasana teôria dia eo anelanelan'ny 8 sy 12 andro fiasana miaraka amin'ny fampandrenesana MRW iray andro alohan'ny fandefasana mifandraika amin'izany. Eny, amin'ny faha-13 ary aorian'ny tsy nahazo vaovao momba izany dia mandefasa mailaka mangataka ary valio izy ireo fa ny terminal an'ireo tolotra ireo dia hozaraina mandritra ny herinandro. Ny alakamisy dia nandefa WhatsApp mangataka indray ny nomeraon'ny MRW hitaky ny fandefasana azy izy ireo ary nilaza taminy izy ireo fa nanana olana amin'ny trano fitehirizana izy ireo ary amin'ny alatsinainy manaraka no hitranga izany. Miantso manokana ny zoma aho hampahafantatra ahy ny satan'ilay baiko ary raha mandeha izany, matahotra ny ratsy indrindra. Ilay zazavavy manatrika ahy dia milaza amiko fa ny finday dia nalefa ary tsy manana ny laharana fandefasana MRW ary hiantso ahy izy hanome ahy io andro io na amin'ny sabotsy hatramin'ny niasany. Mazava ho azy fa tsy misy miantso ahy ary mazava ho azy fa tsy misy maka ny telefaona na finday misy ifandraisany. Taorian'ny fanandramana marobe dia nandefa mailaka tany amin'ny zanako lahy izy ireo nilaza taminy fa noho ny olana tsy takatry ny sainy dia tsy afaka manefa ilay baiko izy ireo. Mamofona toy ny scam feno. Tsy afaka manompo finday izy ireo izay nalefa nandritra ny andro maromaro. Raha mila «inri» misimisy kokoa hatramin'ny andro nividianana ny finday Geekland dia manohy mivarotra finday izay manana tahiry mitovy amin'ny iray izay tsy natolony taminay. Antsoina hoe dokam-barotra mamitaka ity ary heloka bevava mety hiteraka ny fanidiana ny pejy resahina. Mamporisika izay rehetra hita tamin'io tranga io aho mba hitory izany ary mangataka ny hanidiana ny pejy. Manantena aho fa handray andraikitra i Rakuten
Valiny tamin'i Andreu
Apple Watch dia misy amin'ny firenena maro kokoa amin'ny 26 Jona
Pinterest dia hamela anao hividy entana amin'ny alàlan'ny Apple Pay